မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတ်မှတ်အလုံးအရေအတွက်ကို တစ်ရက်တည်းနဲ့ ရောင်းကုန်သွားတဲ့ Samsung Galaxy S7 Edge | မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
» မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတ်မှတ်အလုံးအရေအတွက်ကို တစ်ရက်တည်းနဲ့ ရောင်းကုန်သွားတဲ့ Samsung Galaxy S7 Edge
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတ်မှတ်အလုံးအရေအတွက်ကို တစ်ရက်တည်းနဲ့ ရောင်းကုန်သွားတဲ့ Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S7 Edge ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတ်လ ၄ ရက်နေ့က တရားဝင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာတော့ ရန်ကုန် နဲ့ မန္တလေး တို့တွင် တစ်ချိန်တည်း ရောင်းချပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ Samsung Galaxy S7 Edge ကို လာရောက်ဝယ်ယူသူများဟာ Samsung Galaxy S7 Edge ရဲ့ Feature အသစ်ဖြစ်တဲ့ ရေစိမ်ခံခြင်းနဲ့ ရေထဲတွင် ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများရိုက်ကူးနုိုင်ခြင်းတွေကြောင့် လာရောက်ဝယ်ယူကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Samsung ဟာ လာရောက်ဝယ်ယူသူများကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေဖြင့် Samsung Galaxy Gear2စမတ်နာရီကို ကံစမ်းမဲနှိုက်ကာ မေတ္တာလက်ဆောင်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကံစမ်းမဲ နှိုက်တဲ့အခါမှာလည်း လာရောက်ဝယ်ယူသူ အားလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်စေရန်အတွက် ဆယ်ယောက်ဝယ်ယူပြီးတိုင်း Galaxy Gear2စမတ်နာရီကို ကံစမ်းမဲနှိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Samsung Galaxy S7 Edge ဟာ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစား ၅.၅ လက်မသာရှိခြင်းက သင့်တင့်မျှတတဲ့ အရွယ်အစားလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Resolution 1440 x 2560 pixels ရှိပြီး တစ်လက်မကို 534 pixel နဲ့ ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မှန်အမျိုးအစားကလည်း Corning Gorilla Glass4ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အကြမ်းခံနိုင်တဲ့ မှန်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Display နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အသစ်ပါဝင်လာတဲ့ feature ဖြစ်တဲ့ Always-on Display ဟာ အသုံးပြုသူတို့ရဲ့ Screen ကို အမြဲတမ်းဖွင့်ထားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တက်လာသမျှ Notification တိုင်းကို အမြဲတမ်းသိရှိနုိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုးမဲ့ စနစ်နဲ့ လျင်မြန်စွာ အားသွင်းနုိုင်ခြင်းဟာ Samsung Galaxy S7 Edge ရဲ့ အားသာချက်ဖြစ်တဲ့အပြင် အားသွင်းနှုန်းလျင်မြန်အားဟာ နာရီဝက်အတွင်းမှာတင် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ဘက်ထရီအားသွင်းနုိုင်ပါတယ်။ OS ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း နောက်ဆုံးပေါ် OS ဖြစ်တဲ့ Android Version 6.0 ကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Android Application တိုင်းနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိလှပါတယ်။ RAM4GB ၊ Storage ကို 32GB နဲ့ 64GB ဆိုပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် သွက်လက်ပေါ့ပါးစွာနဲ့ Storage ပမာဏကိုလုံလောက်စွာ အသုံးပြုနုိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ Storage ပမာဏ မလုံလောက်ပါက အွန်လိုင်းတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်စေရန်အတွက် Cloud Storage အမျိုးအစား OneDrive 115 GB ကိုလည်း အခမဲ့ ရယူကာ အသုံးပြုနုိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါနဲ့ မကျေနပ်နိုင်သေးတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုသူများအတွက်နောက်ထပ် Micro SD Card ထပ်မံ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနုိုင်အောင် Micro SD Card Slot ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ဂိမ်းကစားသူများအတွက်လည်း ပေါ့ပါးသွက်လက်စွာ ကစားနုိုင်စေရန်အတွက် Snapdragon 820 Chipset ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် GPU ကိုလည်း Adreno 530 နဲ့ Mali-T880 MP12 တို့ဖြင့် အသုံးပြုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ CPU အနေနဲ့ Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo နဲ့ Quad-core 2.3 GHz Mongoose + quad-core 1.6 GHz Cortex-A53 တို့ကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းကာ အသုံးပြုထားပါတယ်။
ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ပြတ်သားစေရန်အတွက် အတွင်းဘက် ကင်မရာရော၊ အပြင်ဘက် ကင်မရာမှာပါ Auto focus ကို Dual အသုံးပြုထားပါတယ်။ ကင်မရာအနေနဲ့ အတွင်းဘက် ကင်မရာမှာ 12 MP ရှိပြီး အပြင်ဘက် ကင်မရာမှာ 5MP ရှိပါတယ်။ Samsung Galaxy S7 Edge ရဲ့ ကင်မရာနဲ့အတူ ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်လှတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့အပြင် 4K resolution ရှိတဲ့ ဗီဒီယိုများကိုလည်း ရိုက်ကူးနုိုင်ပါသေးတယ်။ Samsung Pay ကိုလည်း VisaCard, MasterCard တို့ဖြင့် အသုံးပြုနုိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Apple Pay နဲ့ နှိုင်းယှဉ်နိုင်တဲ့ အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ Samsung Galaxy S7 Edge ကို အရောင် လေးမျိုး (အဖြူ၊ အမည်း၊ ရွှေရောင်၊ ငွေရောင်) နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ရွှေရောင်တစ်မျိုးတည်းကိုသာ မြန်မာကျပ်ငွေ ၉၀၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် စတင် ရောင်းချသွားခဲ့ပါတယ်။
: မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတ်မှတ်အလုံးအရေအတွက်ကို တစ်ရက်တည်းနဲ့ ရောင်းကုန်သွားတဲ့ Samsung Galaxy S7 Edge
: Samsung Galaxy S7 Edge ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတ်လ ၄ ရက်နေ့က တရားဝင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာတော့ ရန်ကုန် နဲ့ မန္တလေး တို့တွ...
လမ်းသွားရင်း ထောင်ချောက်ထဲ ရောက်မသွားစေဖို့ - Waze...
နောက်ဆုံး ဗါးရှင်းဖြစ်တဲ့ - Facebook 70.0.0.22.83 ...
Mobile Guide ( Vol-3, No-48 ) - No Ads
ကမ္ဘာကျော် Star Wars အက်ရှင်ဂိမ်းကောင်းလေး - [Fix] ...
Monster မိစ္ဆာကောင်ကြီးတွေကို တိုက်ခိုက်ကစားရမယ့် -...
Digital Life ( Vol-4, No-48 ) (No Ads)
ဖုန်းမှာ ဂြိလ်တွေ လည်ပတ် နေတဲ့ 3D ဒီဇိုင်းလေးနဲ့လန...
ဖုန်းမှာ Icon ဒီဇိုင်းအလန်းလေးနဲ့လန်းနိုင်မယ့် - ...
Angry Birds အက်ရှင်ဂိမ်းကောင်းလေး - Angry Birds Ac...
မုဆိုး နေရာကနေ သားကောင်းတွေကိုပစ်ဖမ်းရမယ့်ဂိမ်းလေး...
ဂိုဏ်းစတား ဖိုက်တာနေရာကနေဆော့ကစားရမယ့် - Gangstar ...
ကမ္ဘာကျော် Hero တွေရွေးချယ် တိုက်ခိုက်ရမယ့် ဂိမ်းကေ...
ကမ္ဘာကျော်စစ်တိုက်ဂိမ်းကောင်းလေး - Machines at War ...
ဖုန်း Launcher ဒီဇိုင်းအလန်းစားလေး - M Launcher Pr...
Michael Jordan ရဲ့ အောင်မြင်မှုလျှို့ဝှက်ချက် ၁၀ ချ...
ဖုန်းခေါ်ဆို ပြောသမျှ တိုင်းကို မှတ်သားပေးနိုင်တဲ့ ...
ကားပြိုင်ဂိမ်းကောင်းလေး - Cyberline Racing APK V0....
ဖိုက်တင် ဂိမ်းကောင်းလေး - LEGO HeroFactory Brain A...
ဝေဟင် ပေါ်မှာမောင်းနှင်းပြီးတိုက်ခိုက်ကစားရမယ့် ဂိမ...
ဖုန်း အသုံးပြုရတာ ပိုမြန်ဆန်သွက်လက်စေမယ့် - Cleane...
နာမည်ကြီး လူကြိုက်များတဲ့ဂိမ်း - Temple Run2v1.2...
ကျောင်းသားတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ Google Tips and Trick...
Miracle Box Full Setup V 2.30
Despicable Me 3.6.0p APK + MOD + DATA for Android
နောက်ဆုံး ဗါးရှင်းဖြစ်တဲ့ - Temple Run2v1.22.1 [...
နောက်ဆုံး ဗါးရှင်းဖြစ်တဲ့ - Slots - Pharaohs Way v...
နောက်ဆုံး ဗါးရှင်းဖြစ်တဲ့ - Moto Racer 3D v2016032...
နောက်ဆုံး ဗါးရှင်းဖြစ်တဲ့ - Angry Birds22.6.0 MO...
3D ဒီဇိုင်းနဲ့ မြန်မာအလံကို ဖုန်းထဲ့မှာ အသုံးပြု ...
အင်တာနက် Website တွေကိုဝင်ရောက်ရာမှာမြန်ဆန်သွက်လက်...
လျှို့ဝှက်ချက်တွေများတဲ့ သူများအတွက် - Vault-Hide ...
Wise Care 365 Pro 4.11 Full Version
CD/DVD ကိုကူးမရအောင် Password ပေးမယ် - Gilisoft Se...
Video File ဘယ်လိုမျိုးကိုမဆို Support လုပ်ပေးနိုင်...
Root Xiaomi v2.1.81
Iobit Driver Booster Pro 3.3.0.744 Full Version
သီးနှံ စိုက်ပျိုးရောင်းချ ဂိမ်းလေးပါ [48.2 MB] [ap...
Ultimate ocean predator 2016 [49.6 MB] [apk] Game
မြန်မာဇာတ်ကားများ၊ ဓမ္မတရားတော်များ၊ သတင်းတွေကို ...
MAGIX Photo Manager 16 Deluxe v12.0.0.20 Full (30...
DVDFab 9.2.3.3.Portable Full (71 MB)
Kaspersky Rescue Disk 10.0.32.17 Keygen Full (32-b...
Digital Life ( Vol-4, No-47 )
ကွန်ပျူ တာကို သွက်လက်မြန်ဆန်စေမယ့် - CCleaner 5.16...
itanium Backup PRO ★ root v7.3.0.2 APK